cmmi [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/c/c9fc48156785bc89c94c89879a232885.xhtml failed
2. Ny tanjona
3. Resaka Certification CMMI
16/02/2005 Mpanoratra : RTN
Ny CMMI na koa hoe (Capability Maturity Model Integration), dia fomba iray ahafahana manatsara ny fomba fiasa amin’ny fanamboarana asa informatika.
Ny Ministera ny fiarovana amerikanina moa dia nahatsikaritra fa misy tsy mety mihintsy ny fomba fiasany amin’ny fanamboarana laminasa informatika (lany fotoana,very vola be,sns..), koa dia nanantona ny SEI (Software Engineering Institute http://www.sei.cmu.edu/ ) hamorona fitantanana asa informatika mba ahafahana manatsarana izany.
Tamin’ny voalohany ary dia namorona ny hatao hoe CMM ry zareo (Capability Maturity Model) tamin’ny 1993 no nanombohany. Dia ny Eoropena koa nanamboatra hatao hoe SPICE (ISO15504) tamin’izany.
Raha jerena anefa dia ny ny tsena Anglosaxon no betsaka, na noho zany dia lasa CMM no lasa betsaka mampiasa.ny CMM moa izany tamin’ny voalohany dia Logiciel ihany nojerena, nefa izany taty aoriana dia nilaina koa ny momba ny systeme, ka ny fampidirana azy tao amin’io no nahatonga ny anarany niova lasa hoe CMMI, ny I dia hoe Integration.
Maro ny tanjona amin’ny fampiasana ny CMMI, ireto misy tanjona vitsivitsy anisan’ny mavesadanja dia ny :
Fanatsarana ny fitanana ny Systeme d’information
Fampihenana ny vola lany
Famitana ny asa informatika haingana
Fandridrana ny fiasan’ny olona ary ny fitaovana
Tsy misy resaka fanavaozana ohatra ny ISO 9000 ny CMMI, fa rehefa nahazo indray ianao dia afaka miteny hoe certifie CMMI. Koa tokony hitandrina ihany zany raha misy orinasa miteny hoe izahay certifie CMM5 nefa efa 5 taona lasa ohatra. Tsy mbola misy lisitra ao amin’ny SEI ireo orinasa certifiee, fa mbola eo ampametraha rakitra ry zareo, afahan’ izay te hampiseho hoe certifie,mametraka ny anarany ao
Misy Niveau 5 ny Certification CMMI.
CMMI Niveau 1 : Initial Ny processus, dia miankina amin’ny olona manao ilay laminasa.
CMMI Niveau 2 :Gere Tsy maintsy misy Processus isaky ny asa informatika iray.
CMMI Niveau 3 :Defini Manao famintinana sy fandravonana isaky ny processus hampiasaina, dia hatao izay hampifanaraka azy amin’ny asa informatika vaovao.
CMMI Niveau 4 :Gere quantitativement Misy fanarahana sy fandrefesana matomatotra kokoa amin’ny fiasan’ny processus.
CMMI Niveau 5 :En Optimisation Mitady izay hanatsarana hatrany ny Processus.
Matetika ireo orinasa manao resaka Offshore no tena mampiseho hoe certifiee CMM5 sns ...
Izay indray ary aloha no azo ambara fa dia ambava homana,ampo mieritra.
Lahatsoratra Information System
cmmi.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43